सेयर बजारका लगानीकर्ताले थाहा पाउनै पर्ने यस्ता सूचकमा कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? – BikashNews
२०७८ वैशाख १५ गते १३:०३ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तुलनात्मक रुपमा कम जोखिमपूर्ण लगानी हुने यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि राम्रै देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीको बीचमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रतिफल १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा यस्तो प्रतिफल १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
यो तथ्यले गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुका लगानीकर्ताले औसतमा वार्षिक १२ प्रतिशतले प्रतिफल पाएको देखाउँछ । यो भनेको अंकित मूल्य (प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ) का आधारमा लगानीकर्ताले औसतमा १२ प्रतिशत प्रतिफल पाएका छन् भन्ने हो ।
चालु आर्थिक वर्ष बैंकहरुको नाफाको विषयमा विभिन्न चर्चा र प्रश्नहरु सुनिन्छ । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु बैंकहरुको नाफा निकै कम भएकोले लगानीकर्ता र योग्य जनशक्ति बैंकिङ क्षेत्रबाट नै बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता जनाउन थालेका छन् ।
बैंकहरुले गत चैत मसान्तसम्मको व्यवसायको आधारमा आफूहरुले के कस्तो आम्दानी गरेका छौं भनेर अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा खासै नघटेको त्यस्ता वित्तीय विवरणले देखाएका छन् । सेयरमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने आशामा लगानी गरेका लगानीकर्ताको लागि बैंकहरुका केही सूचक महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छन् । त्यस्ता केही सूचकका लिएर हामीले वाणिज्य बैंकको सेयरमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई कुन बैंकको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिन सजिलो होस भनेर यो सामग्री तयार पारेका छौं ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्ममा बैंकले २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा दुबै बढेसँगै कम्पनीको खुद नाफामा वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १४.४४ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन नाफा ३२.७५ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २२.०५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात २०.४० र प्रतिसेय नेटवर्थ १४८.९२ रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको भने जगेडा कोषको रकम भने ३.०६ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मात्रै सञ्चित रहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.०७ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा दुबै बढेसँगै कम्पनीको खुद नाफामा वृद्धि भएको हो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद व्याज आम्दानी १९.२३ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन नाफा २१.९७ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा १९९.५४ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्ष बैंकको यस्तो नाफा ४० करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेर ३४.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । पीई रेसियो २७.८२ र प्रतिसेय नेटवर्थ १६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको भने जगेडा कोषमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । कोषको रकम गत वर्षको तुलनामा १५.२० प्रतिशतले बढेको छ ।
एनएमबि बैंकले २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८७.८० प्रतिशत बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सञ्चालन नाफा ८६.७८ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेर २०.६४ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष बैंकको यस्तो आम्दानी ११.६७ रूपैयाँ मात्रै थियो । पीई रेसियो २१.१७ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५.३२ रूपैयाँ रहेको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको भने जगेडा कोषमा ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सञ्चित छ । कोषको रकम गत वर्षको तुलनामा ५.९४ प्रतिशतले बढेको छ ।
नबिल बैंकलेले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १६.५० प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी भने ५.०९ प्रतिशतले घटेर ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । खुद व्याज आम्दानी घटेपनि बैंकको सञ्चालन नाफा लगायत अन्य आम्दानी बढेसँगै बैंकको खुद नाफा बढ्नमा टेवा पुगेको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा १६.३७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नबिल बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८१ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा कोषको रकम ११.२२ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३६.४० रुपैयाँ छ । पीई रेसियो ३७.९१ प्रतिशत छ ।
कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो नाफा बैंकको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.३९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, खुद व्याज आम्दानी ४ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ र जगेडा कोषमा १० अर्ब ११ करोड रूपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी २२.१९ रुपैयाँ छ ।
एभरेष्ट बैंकको नाफा ३५.९२ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड २६ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको एभरेष्टले चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ५० करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको हो ।
बैंकको रिजर्भमा ९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ भने वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ६ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ छ ।
हिमालयन बैंकले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४४.४५ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैंकले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी २९.४५ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सञ्चालन आम्दानी २४ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । वितरणयोग्य नाफा ८४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषको रकम ६.६२ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १६.०६ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७१ रुपैयाँ छ ।
सिद्धार्थ बैंक २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ५४.१२ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंकको उक्त आम्दानी ६.०३ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सञ्चालन आम्दानी भने ९.१० प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुद नाफासँगै कम्पनीको सञ्चालन नाफा पनि ५०.७५ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष ऋणात्मक रहेको बैंकको वितरणयोग्य नाफा बढेर ८३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा कोषको रकम ४४.२५ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २५.२८ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि बढेर १८१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.६१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ४.०९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफा ९.२५ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी भने बढेर १९.०१ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १८.५२ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३९ रुपैयाँ पुगेको छ ।हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको भने जगेडा कोषमा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंक
नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंकले १ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत वर्षको ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ७.३५ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ९५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको यसै अवधिका बैंकको खुद व्याज आम्दानी २ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो ।
बैंकको सञ्चालन नाफा ५६.५१ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब २८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषको रकम २८.१२ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २४.२६ रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि बढेर १६५.७६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल बैंकले २ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.३१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको चैत मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी ११.७५ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफा २९.७६ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २३.८७ रुपैयाँ छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १९.२३ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २७०.२२ रुपैयाँ छ ।
हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको भने जगेडा कोषमा २१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ ।
प्रभु बैंकले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४४.८ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संस्थाले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी र सञ्चालन आम्दानी बढेसँगै खुद नाफा बढ्न पुगेको छ । बैंकले ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी र ५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा क्रमशः ६.६० र १५.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा ७७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी २४.७९ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५२.८६ रुपैयाँ छ ।
कुुमारी बैंकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ७८.५८ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी र सञ्चालन आम्दानी बढेसँगै खुद नाफा बढ्न पुगेको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी र ५ अर्ब रुपैयाँ बढी सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा क्रमशः ३९.०४ र ४४.८३ प्रतिशतले बढी हो ।
वितरणयोग्य नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । बैंकको चैत मसान्तसम्मा वितरणयोग्य नाफा ९८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।
चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १७.३७ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५.४९ रुपैयाँ छ ।
सिभिल बैंकले ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोे छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
बैंकले कर्जा तथा ऋण लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तको तुलनामा सिभिल बैंकको निक्षेप ६१.९६ प्रतिशतले बढेको छ भने कर्जा प्रवाह ५४.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
बैंकले ८७ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८१ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्म बैंकले ५४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ४१.६१ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पहिलो ९ महिनामा बैंकले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।
बैंकले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको चैत मसान्तसम्ममा ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी २०.७२ रुपैयाँ छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १५.९४ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४६.८७ रुपैयाँ छ ।
गत वर्ष एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको सञ्चालन नाफा चालु आवमा बढेर एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चैत मसान्तमा बैंकले खुद व्याज आम्दानीबाट २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको यही अवधिमा २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, २१ बैंकले कमाउँदा ६ वटाले गुमाए
कर छुटको नाममा मर्जरले ल्याउने सिनर्जीकाे विषयलाई बिर्सनु हुँदैनः सरोजकाजी तुलाधर
One comment on "सेयर बजारका लगानीकर्ताले थाहा पाउनै पर्ने यस्ता सूचकमा कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?"
Pingback: सेयर बजारका लगानीकर्ताले थाहा पाउनै पर्ने यस्ता सूचकमा कुन बैंकको अवस्था कस्तो ? – OnlinePahar